Wararka Maanta: Talaado, Jan 22, 2013-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Xafiiskiisa ku qaabilay Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Danjire Mahiga
Mudane Saacid iyo Mahiga ayaa kawada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu horreysay horumarrada xukuumada, aqoonsiga dowladda Mareykanka, difaaca xuquuda aadanaha iyo dib u dejinta Barakacayaasha Gudaha.
Shir jaraa’id oo ay wadajir u qabteen ra’iisal wasaaraha wakiilka ayaa waxay ku faahfaahiyeen ujeeddada kulankooda iyo natiijooyinkii kazoo baxay.
“Wakiilka xoghayaha guud ee arrimaha Soomaaliya, waxaan kawada-hadalnay waxyaabo badan oo ay ku jirto dadaallada caalamku wado ee ku aadan horumarka iyo taageerada xukuumadda, wuxuuna inoo muujiyay sida ay u garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya,” ayuu yiri Saacid oo xusay in danjiraha uu ugu hambalyeeyay aqoonsigii ay dowladda Mareykanka u muujisay dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale, ra’iisal wasaaruhu wuxuu intaas ku daray inay kawada hadleen dhawrista xuquuqda aadanaha, gaar ahaana ka hortagga falalka ka dhanka ah suxufiyiinta iyo dumarka.
“Dowladdu waxay illaalinaysaa isla markaana xushmad gaar ah u heysaa bahda warfaafinta oo iyagu u dhabar adeygay sidii ay bulshadooda iyo bulshada caalamka ugu bandhigi lahaayeen xaaladaha dhabta ah ee ka jira dalkeena,” ayuu mar kale yiri ra’iisul wasaare Saacid, isagoo si gaar ah u xusay in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan kooxo uu ku tilmaamay Iimaan-laawayaal ku xadgudba sharafka gabdhaha Soomaaliyeed.
Wakiilka xoghayaha guud oo isna shirka jaraa’id ka hadlay ayaa u sheegay warbaahinta inuu ku faraxsan yahay inuu maanta la kulmo isagoo ka wakiil ah Qamarada Midoobay, isagoo ra’iisul wasaaraha ku tilmaamay inuu yahay ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soonaaliya ee rasmiga ah, isagoo sidoo kale xusay inuu ku yimid hab dimuqraaddi ah.
“Waxaan rabaa inaan hortiinna ka caddeeyo in Qaramada Midoobay ay aad u taageersan tahay dowladda Soomaaliya oo ah dowlad matalaysa shacabkeeda,” ayuu yiri danijre Mahiga oo xusay in Qaramada Midoobay ay ballan-qaadeyso inay gacan ka geysanayso dib u dhiska dalka iyo hay’addihii dowladda.
Danjira Mahiga ayaa tilmaamay in ay dowladda ka taageerayaan dib u dejinta barakacayaasha gudaha dalka ee tiradoodu gaareyso hal milyan ayna nus malyuun ka mid ah ay ku nool yihiin magaalada Muqdisho.
Dhanka kale, danjire Mahiga ayaa uga mahadceliyay madaxda dowladda Soomaaliya sida ay u muujiyeen siyaasada cad ee ay dowladdu fulineyso wuxuuna hoosta ka xariiqay inay aad ula dhacsan yihiin wadajirka iyo hufnaanta ay muuiyeen.
Ugu dambeyntii, ra’iisal wasaaraha ayaa si gaar ah ula kulmay Warbaahinta gudaha iyo dibadda isagoo si dhow u weydiiyay tabashadooda iyo dhibka haysta, waxayna warbixin dheer ka siiyeen aragtidooda ku aadan sida ay ula dhacsan yihiin dowladda Soomaaliya iyo horumarka ay sameynayso, iyagoo ka hadlay falalka liddiga ku ah suxufiyiinta oo ay codsadeen in laga hor-tago falalkaas. Isagoo ra’iisul wasaaruhu ka dalbaday inay iska soo dhex xulaan guddi u hadla bahda warbaahinta.